Dhakhaatiir Turki ah oo adeegyo caafimaad ka fuliyey Galkacyo, qalitaanno indha ahna u sameeyey 300 oo qof. – Radio Daljir
Dhakhaatiir Turki ah oo adeegyo caafimaad ka fuliyey Galkacyo, qalitaanno indha ahna u sameeyey 300 oo qof.
Seteembar 24, 2011 12:00 b 0
Gaalkacyo, Sept 24 – Ku dhawaad 300 oo qof oo qabay xanuuno xagga indhaha ah ayaa qaliimo iyo daawayn lacag la’aan ah lagu sameeyey cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Dhaqaatiirta qalliimadaan fulinaya oo u dhalatay waddanka Turkigu ayaa maalintii 2-aad hawlahooda qaliin iyo daawayneed ka wada cisbitaalka magaalada Gaalkacyo iyadoo ay ka faa’iidaysteen ku dhawaad 300 oo qof oo ka kala yimid deegaannada Puntland iyo gobollada kale ee Soomaaliya.
Dadka qalliimaadaan iyo daaweyntaan caafimaad loo fuliyey ayaa iskugu jira dad waayeel ah iyo kuwo da?yar ah oo xanuunnada indha la?aantu ku soo boodeen.
Dhaqaatiirtaan Turkiga ah ayaa lagu wadaa muddo afar maalmood ah inay cisbitaalka ka wadaan adeegyadaan caafimaad, kaddibna gaaraan magaalada Bossaso ee gobolka Bari, halkaasoo ay ka fulin doonaan adeegyo kuwaan la mid ah sida uu Radio Dalir u xaqiijiyeyagaasimaha guud ee Cisbitaalka Gaalkacyo C/raxmaan Maxamed Jamac.
Agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Gaalkacyo C/raxmaan Maxamed Jaamac, dinaca kale maanta Radio Daljir uga waramay arima caafimaad ee ka socda cisbitaalka Galkacyo waxaana uu sheegay inay fursadaani tahay mid qiimo wayn ugu fadhida shacabka Soomaaiyeed ayna ka faa’iidaysteen dad badan oo la’ildarnaa xanuuno xagga indhaha.
Deeqdaan caafimaad ee dawladda Turkigu ugu deeqday dadyawga ku dhaqan deegaannada Puntland ya ayaa waxaa barbar socda deeq waxbarasho oo iyana laga helay dalkaasi Turkiga taasoo haatan hawlaheeda u tartamid ay ka bilawdeen gobollada Puntland.
Mudanayaasha baarlamaanka federaalka oo maanta ka doodaya shuruucda maaliyadeed ee dawladda.
Weriye ka tirsan idaacadda codka nabadda oo si xun loogu dhaawacay Bossaso.